E-liquid Bhodhoro Kuzadza Machine - Micvd.com
Kutsvaga akavimbika e-mvura yekuzadza michina yetambo yako yekugadzira? Pano pa NPACK, iwe uchawana akasiyana e-efaidhi mafirimu akagadzirirwa uye akavakwa kuti asangane nezvinodiwa zveanoda chero mhando yekuzadza system. Unogona kutarisa kusarudzika kwedu kwakakwana kwe-e-liquid kuzadza zvishandiso pano uye tsvaga yakanakisa yemuchina wako. Bata isu kuti titore mahara nhasi uye tichava nechokwadi chekutora zvaunoda kuti upedze masisitimu ako.
Kana iwe uchida mamwe akakwirira-emhando yepamusoro emakomputa ako e-liquid mapaketi, tinotakura zvakanyanya kupfuura e-liquid yekuzadza michina, ine zvigadzirwa zvakasiyana siyana zve-e-zvinwiwa, zvinosanganisira magetsi, macappers, uye vashandi. Isu tinotakurawo zvikamu zvekutsiva zvemidziyo iyo inogona kukubatsira kuti uchengetedze mitsara yako yekugadzira. Iwe hausi kuzowana zvirinani e-fluid pakumrongedza chero kupi zvako pamusika.
Mhando dzeE-Liquid Kuzadza Machina Isu Tinotakura
Isu tinotakura zvakasiyana e-liquid yekuzadza michina kusangana nezvido zvako zvekugadzira, zvinosanganisira:
510 Kuzadza Machine
Variable vhoriyamu Kuzadza Turu
E-Liquid Kuzadza Syringe
Pasinei nemhando yemidziyo yaunoda kune yako application, uchaiwana pano NPACK, pamwe neakawanda emimwe michina ye-e-zvinwiwa uye zvimwe zvinogadzirwa zvemvura zveanenge chero maonero uye kuenderana.
Zvimwe Zvigadzirwa ZveE-Liquid Packaging Systems
Pamusoro pekusarudza kwedu kwema fluid filters, iwe unowana zvese zvaunoda kuti upedze masisitimu ako. Isu tinotakura vachenesa kuti ive nechokwadi chekuti ma cartridge emota akachena isati yazadza. Iwe unogona zvakare kuwana macappers ane tsika masisitimendi e-liquid ma cartridge, pamwe chete nevanyoreri kuti vadhindire mahebhu mune akasiyana zvishandiso uye ine netsika mifananidzo uye zvinyorwa. Convisors inowanikwawo neyakagadzirirwa maitiro.
Sei Tishandise E-Juice yedu Bhodhoro Makina?
Chii chinoita NPACK e -etsi mafiribha akasiyana nemamwe maburitsu emidziyo zvigadziro zvemhando. Isu tinove nechokwadi chekuti zvese zvigadzirwa zvatinotakura zvakavakirwa nemhando yepamusoro inowanikwa yekushandisa kuvandudza kutendeka kwese kwechigadzirwa chedu. Kukubatsira iwe kuchengetedza e-liquid yekuzadza michina, isu tinopawo akati wandei masevhisi sekuisa, kutsetseka mutsara, kubatanidza mutsara, uye kudzosera kumashure kudhinha.
Ingokumbira kopi yemahara kwatiri uye isu tichakubatsira iwe kuti uwane chigadzirwa chakakwana kuti uwedzere kushanda uye mutengo-unobudirira.
E-otomatiki E-liquid Kuzadza Machineis inoshanda kune indasitiri yemishonga mu 2-30 ml bhodhoro rekuzadza mvura uye kuisa chisimbiso marongedzero, yakakwirira chaiyo piston pombi (kana peristaltic pombi) kuzadza, kuyerwa kwakaringana, kunogadziriswa, kuri nyore kugadzirisa, kushanda kuri nyore, hapana bhodhoro hapana kuzadza, hapana bhodhoro hapana plug, kwete plug chifukidzo basa.
30-40 mabhodhoro / miniti
Dhinda tapping pipe
99% kana kupfuura (zvichienderana nezviratidzo zvepurgi kuchinja kwakakodzera)
Kupfuura 10 mm